တပ်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ် ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး မင်းအောင်လှိုင် မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ လာအိုနိုင်ငံ သံအမတ်ကြီး H.E. Mr. Heuangseng KHAMDALAVONG အား လက်ခံ တွေ့ဆုံ | cincds
တပ်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ် ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး မင်းအောင်လှိုင် မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ လာအိုနိုင်ငံ သံအမတ်ကြီး H.E. Mr. Heuangseng KHAMDALAVONG အား လက်ခံ တွေ့ဆုံ
နေပြည်တော်၊ မေ - ၃၀
တွေ့ဆုံပွဲအပြီးတွင် တပ်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်နှင့် မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ လာအိုနိုင်ငံသံအမတ်ကြီးတို့သည် အမှတ်တရလက်ဆောင်ပစ္စည်းများအပြန်အလှန် ပေးအပ်ပြီး စုပေါင်းဓာတ်ပုံရိုက်ခဲ့ကြကြောင်းသတင်းရရှိသည်။
တပျမတျောကာကှယျရေးဦးစီးခြုပျ ဗိုလျခြုပျမှူးကွီး မငျးအောငျလှိုငျ မွနျမာနိုငျငံဆိုငျရာ လာအိုနိုငျငံ သံအမတျကွီး H.E. Mr. Heuangseng KHAMDALAVONG အား လကျခံ တှဆေုံ့
တှဆေုံ့ပှဲအပွီးတှငျ တပျမတျောကာကှယျရေးဦးစီးခြုပျနှငျ့ မွနျမာနိုငျငံဆိုငျရာ လာအိုနိုငျငံသံအမတျကွီးတို့သညျ အမှတျတရလကျဆောငျပစ်စညျးမြားအပွနျအလှနျ ပေးအပျပွီး စုပေါငျးဓာတျပုံရိုကျခဲ့ကွကွောငျးသတငျးရရှိသညျ။